संक्रमित भेट्दै, उर्जा थप्दै उपाध्यक्ष बुढा – Newssarokar
न्यूज सरोकार । २० जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०९:३८
जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिष्णु बुढाले गाउँपालिका भित्रका कोरोना संक्रमितको मनोबल उचो बनाउन घरदैलो अभियान थालेकी छिन् । उनले संक्रमितको अवस्था बुझ्दै संक्रमितका परिवारलाई सहानुभुति दिदै आएकी हुन् । कोरोना कहरको पहिलो चरणमा सचेतना कार्यक्रम लिएर जनताको घरदैलोमा पुगेकी उपाध्यक्ष बुढाले दोस्रो लहरमा संक्रमितलाई भेटेर कोरोना संक्रमण फैलन नदिनको लागि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिन ।
गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी लिएर स्वास्थ्य परामर्श दिदै लक्षण अनुसारको औषधि उपलब्ध गराउदै आएकी हुन् । उनले संक्रमितलाई एक क्यारेट अण्डा, औषधि र स्वास्थ्य परामर्श दिदै आएको बताइन् ।
उनले भनिन्,‘कोरोना संक्रमित भन्ने वित्तिकै गाउँमा फरक तरिकाले हेर्ने गरिन्छ । कोरोना एक प्रकारको रोग हो । रोग लाग्दैमा मान्छे मर्दैन् । तर कोरोना देखिएको बेला अत्यधिक लापरवाही गरेको खण्डमा ज्यान पनि जान सक्छ । त्यसैले संक्रमित र संक्रमित परिवारले सचेत हुन जरुरी छ । त्यही सचेत पार्न घरदैलो अभियान शुरु भएको छ । ’
उपाध्यक्ष बुढा स्वास्थ्य संयोजक गणेशबहादुर शाही, अहेब उत्तम देवकोटा पनि संक्रमितको घरदैलोमा जाने गरेका छन । उपाध्यक्ष बुढाले भनिन्,‘कोरोना सामुहिक समस्या भएकोले सामुहिक रुपमा प्रतिरोध गर्नुुपर्छ । स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ । ’
उनले संक्रमितको स्वास्थ्यमा जटिल प्रकारको समस्याआउने वित्तिकै खबर गर्न आग्रह गरिन । उनले भनिन्,‘कोरोना संक्रमणका कारण दिनहुँ ज्यान गइरहेकोछ । जटिल समस्या आएपछि खबर गर्नुहोला अस्पताल सम्म लैजाने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नेछ । साथै स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध पनि ।’
होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितले उच्च सतकर्ता अपनाउनु पर्ने उनले बताइन । यहाँका संरचना होमआइसोलेसन मैत्री छैनन । संक्रमित भएर घरमा बस्नेले सबैभन्दा बढि ध्यान दिनुहोला । उनले भनिन्,‘घरबाहिर निस्कदा मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोला । सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुका साथै साबुन पानीले नियमित हात धुनु होला । सामाजिक तथा व्यक्तिगत दुरी कायम गर्नुहोला । परिवारलाई संक्रमण हुन सक्ने खतरा भएकोले पारिवारिक स्वास्थ्य सुरक्षामा पनि ख्याल गर्नुहोला । ’
गाउँपालिकाको वडा नं. ४ का चार जना, वडा.नं. ३ को १ जना,र वडा नं. ७ को दुई जनालाई घर दैलोमा पुगेर स्वास्थ्य परामर्र्श दिने काम भएको उनले बताइन । तिला गाउँपालिका ३ का होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमित दत्त गिरीले घरदैलोमा पुगेर संक्रमितको मनोबल उचो बनाउने कार्य गरेकोमा खुसि व्यक्त गरे ।
उनले भने,‘सरकारले सबै बेहोर्न त सक्दैन् । तर घरदैलोमा पुगेर संक्रमित भेटेर स्वास्थ्य परामर्श दिदै लक्षण अनुसारको औषधि उपलब्ध गराउनु निकै ठुलो कुरा हो । त्यसैमा एक क्यारेट अण्डा प्रदान गर्नु भएको छ । हामी संक्रमित सन्तुष्ट छौँ । ’
तिला गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक गणेबहादुर शाहीले घरदैलोमा पुगेर संक्रमितालाई उर्जा दिने काम उदाहरणीय भएको बताए । उनले भने,‘घरदैलोमै जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीको टोली पुग्दा संक्रमित खुसि हुने गरेका छन । लक्षण अनुसारको औषधि दिन्छौँ ।स्वास्थ्य परामर्श दिएर फर्किन्छौँ । ’
उनले संक्रमितलाई यतिबेला हौसला र उत्प्रेरणाको खाँचो भएको बताए । सो अवसरमा संक्रमितलाई भेटेर गाउँपालिकामा बनाइएका आइसोलेसनमा आएर बस्न आग्रह गरिएको थियो । गाउँपालिकामा २५ बेडको आइसोलेसन र ५ बेडको कोभिड अस्पताल अक्सिजन र चिकित्सक सहित सञ्चालनमा छ । कोरोना संक्रमण फैलन नदिन र संक्रमितको स्वास्थ्य उपचारमा गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको उपाध्यक्ष बुढाले बताइन ।
कोरोना मैदानमा उपाध्यक्ष बुढाले खेलेको भुमिका प्रसंसनीय रहेको स्थानीय बताउँछन । पहिलो लहरमा क्वारेन्टिन निर्माण, व्यवस्थापन र सचेतना फैलाउने कार्यमा खटिएकी उपाध्यक्ष बुढा दोस्रो लहरमा आइसोलेसन निर्माण र व्यवस्थापनमा खटिएकी हुन ।
कोभिड अस्पतालमा डक्टर,नर्स र कार्यालय सहयोगीको उचित व्यवस्थापनका लागि निकै सक्रिय छिन् । कोरोना संक्रमणले अप्रिय घटना नहोस भन्नेमा चिन्तित छौँ, उनले भनिन्,‘जसका लागि गाउँमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखालाई परिचालन गरिएको छ । गाउँपालिका भित्र ३ ठाउँमा हेल्थ डेस्क राखिएको छ । ’
उपाध्यक्ष बुढा नियमित हेल्थ डेस्कमा गएर स्वास्थ्यकर्मीलाई उर्जा दिने र हेल्थ डेस्कको व्यवस्थापन गर्न र रेखदेखमा चासो राख्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन । तिला गाउँपालिकामा ९ वटा वडा छन । ३४ बस्ती छन् ।
जिल्ला बाहिरबाट गाउँपालिकामा प्रवेश गर्ने जो सुकैलाई जुम्ला कालिकोटको सिमानामा जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाले राखेको हेल्थ डेस्कमा एन्टीजेन परिक्षण गरेर मात्र प्रवेश गर्न सुचित गराइन । । उनले पोजेटिभ रिर्पोट आउने वित्तिकै सम्पर्क गरेर गाउँपालिकाले बनाएको आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरिन । कोरोना संक्रमण देखिने वित्तिकै नआत्तिनु होला । तपाइहरुको व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिका तयार छ । उनले भनिन्,‘तपाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरिदिनुस । संक्रमितको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गर्नेछ । ’
उनले गाउँपालिकाले कोरोना फैलन नदिन गरेका हरेक क्रियाकलाप कार्यन्वयन गरेर साथ दिनु पर्ने बताइन । गाउँपालिका भित्र हरेक गाउँमा एक सुचना सम्प्रेषण व्यक्ति राखेको छ । गाउँपालिका ११ जना संक्रमित छ । एक जना कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्ठिानमा उपचार गराइरहेका छन । संक्रमितको रिर्पोट नेगेटिभ आइसकेको छ ।
पहिलो लहरको कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्षित गरी बनाउन थालिएको पुनर्एकीकरण सम्बन्धी निर्देशिका दोस्रो लहरको कोरोना नियन्त्रणउन्मुख हुँदा समेत तयार हुन सकेको छैन। निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारी वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्वीकृतिका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा चार महिनाअघि नै पठाएको थियो। महामारीका कारण समस्यामा […]